पुनर्संरचना : शान्तिको पहिलो शर्त
देश वडो रमाइलो छ । भौगोलिक र प्राकृतिक हिसावले मात्रै होइन, सामाजिक र वौध्दिक हिसावले पनि । उर्वर विचार र तत्काल नतीजा हामी नेपालीको सँधैको चाहना हो । राणातन्त्र फालेर प्रजातन्त्रमा प्रवेश गरेको दशक नवित्दै मानिसहरु प्रजातन्त्रभन्दा राणातन्त्र ठीक थियो भन्न थालेका थिए । सक्रिय राजतन्त्र फालेर संसदीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको वर्ष दिन नवित्दै नयाँ व्यवस्थाको उछित्तो काटने काम शुरु भै सकेको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि कति छिटो राजा आउ देश वचाउको नारा लाग्यो यो त सवैले थाह पाएकै कुरा हो ।
यो त देशको कुरो भयो । व्यक्तिका कुरामा पनि नेपाली जातिको व्यग्रता उदाहरणीय छ । जतिवेला सरकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गर्दै थियो, त्यतिखेर कार्कीको नियुक्तिले लोकतन्त्रको हुर्मतलिने चर्चा शिखरमा थियो । अहिले कार्की हराएर विलीन भएका छन ता पनि उनको तारीफगर्नेहरुको संख्या पनि वढदो छ ।
यतिखेर, देशका प्रमुख र प्रवुध्द भनिने संचारकर्मी, वुध्दिजीवी र सामाजिक संजालका प्रयोगकर्ता दशक लामो युध्दका वेला माओवादीले सत्र हजार मानिस मारेको चर्चामा रमाउन लागेकाछन । यो विषय अरु धेरैका लागि पनि खेतीपाती अर्थात गरी खाने मेलो भएको छ । जुन देशमा मानव अधिकारको अवस्था सवैभन्दा कमजोर छ, जुन देशमा दण्डहीनता प्रतिदिन मौलाउँदो छ, जुन देशमा सामाजिक सदभाव क्षीण हँुदै गएको छ त्यो देशमा मानव अधिकारको चिन्ता र चर्चाको खेती हुनु स्वाभाविक हुन्छ । चिन्ता र चर्चा गरे पुग्छ, अरु केही गर्नु पर्दैन । समस्याको स्थायी समाधानका लागि कुनै पहल गर्नु पर्दैन । हिंसाले प्रतिहिंसा र हत्याले प्रतिहत्या जन्माउँछ । यो स्वाभाविक हो । त्यसलाई रोक्नका लागि पनि यस्ता चर्चालाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन ।
अहिले भै रहेको चर्चा र हिंसाको पृष्ठभूमि धेरै फरक छ । हिंसा अहिले पनि जारी छ । अहिले पनि १२०० मधेशीहरुका नाममा मुद्दा चलाइएको छ । मलेशियामा कार्यरत ब्यक्तिपनि सरकारको सूचीमा छ । घाइतेको संख्या उत्तिकै छ । यो अवस्थाको चर्चा गरियो भने हिंसाको चर्चा गरेर समाजमा जस्तो भावनात्मक आवेग ल्याउन खोजिएको आरोप लगाइन्छ । अहिलेको समय आधुनिक स्वरुपको राजनीतिसंग नमिल्दोछ । देश संविधानको कार्यान्वयनमा लागेकोछ । यस्तो वेला उठाइएका मानव अधिकारका प्रश्नहरु अन्य विवादहरुसंगै घालमेल होलान भन्ने त्राश छ ।
दक्षिण एशियाको राजनीतिमा आरोप लगाउने चलन पुरानै हो । तीस वर्षसम्म राजाको नेतृत्वमा चलेको पन्चायत व्यवस्थाले कांग्रेसलाई अराष्ट्रिय तत्व भनी रह्यो । कांग्रेसले पन्चायतलाई जन–हत्यारा र भ्रष्टहरुको व्यवस्था भन्न कहिल्यै छाडेन । संसदीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि सत्ताको केन्द्रमा स्थापित भएका दुइ प्रमुख दल, नेपाली कांग्रेस र एमाले वीचको राजनीतिक व्दन्व्दले घीनलाग्दो रुप लिएको थियो । मोटर दुर्घटनामा मदन भण्डारीको मृत्युपछि त प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हत्याराको संज्ञा दिन समेत एमाले चुकेको थिएन । अन्तत, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष वीचको यो झगडाले संसदीय प्रजातन्त्रलाई नै कमजोर वनायो । मध्यावधि चुनावपछि संसदीय प्रजातन्त्र थला पर्यो र देशलाई कुनै तात्विक परिणाम दिनै नपाई यसको अवसान भयो । त्यो पनि, राजाको हातवाट ।
त्यसपछिको समयमा विद्रोही माओवादीलाई शान्तिको वाटोमा ल्याउन राजनीतिमा खारिएका, सवै पक्षवाट मानिएका र आँटिला भनेर कहलिएका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहल गरेका थिए । अनेक चरणका वार्तापछि भारतको राजधानी दिल्लीमा वाह«बूँदे सहमति भएको थियो । त्यसपछिको जन–आन्दोलनले नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र राजतन्त्रको निलम्वन गरेको थियो । त्यतिखेर, माओवादी विद्रोहका क्रममा मारिएका सत्रहजार मानिसको प्रश्न उठाएका थिएनन । न त यसको चर्चा अरु नेताहरुले नै गरेका थिए । सामाजिक संजालको प्रयोग र प्रभाव पनि खासै थिएन । आन्दोलनपछि विद्रोही शक्ति विस्तारै सत्ताको केन्द्रमा पसे । विद्रोहीलाई संसदीय प्रक्रियामा ल्याउनकै लागि जन–आन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद व्यवस्थापिका संसदमा परिणत भयो । त्यसपछि निर्वाचित संविधान–सभा । त्यसपछि गणतन्त्र । विद्रोहका दशकमा मारिनेहरु सत्र हजार थिए कि सैंतिस हजार ? वेपत्ता हुनेहरु बीस हजार थिए कि चालीस हजार ? कर्णाली र अरु ठूला नदीमा जिउँदै फालिनेको संख्या कति थियो ?
संविधान सभाको निर्वाचनपछि देश अनिर्णय र अनिश्चियको भूमरीमा फँस्यो । राज्यको पुनर्संरचना सवैलाई चाहिएको थियो । तर, यो कार्यसूचीमा माओवादी लचिलो हुन चाहेन । संसदवादीहरु कस्तो पुनर्संरचना ? भन्नेमा नै अलमलिए । प्रतिस्पध्र्दात्मक निर्वाचनका आधारमा समानुपातिक ढंगले शक्तिको वितरण कसरी गर्ने ? कसरी नेपाली समाजलाई समावेशी तुल्याएर सवैका लागि अवसरको समानता जुटाउने ? कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गराउने भन्ने जस्ता विषयमा नेताहरु गम्भीर नै हुन सकेनन । मधेशका नेताले मधेशमात्रै सोच्ने, पहाडका नेताले मधेशमा चल्ने तातो हावाको अनुभव नै नगर्ने – वडो विचित्रको अवस्थामा फँस्यो देश । अहिलेसम्म यो दलदलबाट देश बाहिर आउन सकेको छैन । आफनो दललाई कसरी शक्तिशाली वनाउने भन्नेमा नै सवै नेता अल्झिएका छन । समग्र नेपालका वारेमा सोच्ने राष्ट्रिय चिन्तन भएका नेताको अभाव खटकिन थालेको छ ।
राज्य पुनर्संरचनाको मामिलामा समझदारी र सहमति गर्न सक्ने खूवी नै देखिएको छैन नेपालका नेताहरुमा । एकथरिले सोचेका छन राज्यको पुनर्संरचना माओवादीलाई मात्रै चाहिएको हो । माओवादीको सोचाइ छ, संसदवादी दलहरुलाई राज्यको पुनर्संरचना चाहिएकै छैन । तर, देश गणतान्त्रिक भै सकेपछि त्यस अनुरुप राज्यको पुनर्संरचना हुनै पर्दछ । त्यसको अर्को विकल्प छैन । दशैंका बेला राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति विभिन्न देवी मन्दिरमा गएर दर्शन गर्दैमा गणतन्त्र संस्थागत हुने होइन ।
देशमा दशक लामो युध्द भयो । जसका आँखाले युध्दको भयावहता देखेका छन, जसले युध्दको विभिषिकालाई प्रत्यक्ष भोगेका छन, तिनले मात्रै सम्झिएका छन, देश कुन पीडावाट गुज्रिएको थियो । अहिले युध्दपछिको राजनीतिमा फागु खेली रहेका राजनीतिक दलका नेताहरु यो पीडाको मापनगर्न, यसलाई अनूभूतगर्न र संवेदनशील हुन असक्षम सावित भएका छन । नेताहरुको यो व्यवहारसंगै धेरैलाई लाग्न थालेको छ देशमा गणतन्त्र, त्यत्तिकै, फोसामा आएको हो । गिरिजा र प्रचण्डले भारतवाट ढाकरमा वोकेर ल्याएका हुन नेपालमा गणतन्त्र ।
नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन नेपाली जनताले अद्भूत पसीना काढेका छन । एउटा सानो देशका जनताले आफना अधिकार प्राप्तिका लागि यति लामो समयसम्म संघर्षगर्नु चानचुने कुरा होइन । दुर्भाग्य कि, जतिजति वेला जनताका अधिकार स्थापित हुने गर्दछन त्यतित्यति वेला राजनीति असहिष्णु वन्न थाल्दछ । साना वा ठूला दलहरुको आ–आफनै कार्यसूची हुनु अस्वाभाविक होइन । अस्वाभाविकता के हो भने दलहरुका वीच कुनै साझा राष्ट्रिय कार्यसूची तय हुन नसक्नु हो । यसका लागि राजनीतिक नेताहरु एकठाउँमा बसेर संघीयता लगायत अन्य राष्ट्रिय कार्यसूचीको खाका तयार गर्नुपर्दछ । यो काम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एक्लैगर्ने काम होइन । यसका लागि सबै मिलेर कामगर्ने परिस्थितिको निर्माण हुनुपर्दछ । त्यसो नगरे सम्म देश राजनीतिक अस्थीरतावाट मुक्त हुन सक्दैन । यसका लागि दवावदिन जनता पनि तयार हुनुपर्दछ । खाली चर्चाका लागि चर्चा गरेर केही हुँदैन ।